Oru ndi ozo | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Gwa m, ọ bụrụ na ụmụ klas m, m pịa bọtịnụ ahụ - zoo n'okpuru ozi ahụ, olee otu esi ahụ ha?
Gwa m, ọ bụrụ na ụmụ klas m, m pịa bọtịnụ ahụ - zoo n'okpuru ozi ahụ, olee otu esi ahụ ha? ọ ga - adị mma ile anya n'akwụkwọ ozi niile nke edere na leta BRIEFLY Iji weghachi ozi zoro ezo ...
Esi achọ ndị mmadụ na mail?
Esi achọ ndị mmadụ na mail? menu chọpụta ụwa m Safar salmanov@mail.ru Mbụ ị chọrọ ịmepụta Ụwa m, wee gaa Chọọ. Ekwenyere m na Artem Maltsev. Tinye ya na ya ...
Koodu PIN Warface
PIN codes Warface Great news Nke a na saịtị naanị nyere m emvu emuta akwụ ụgwọ na enweghị m ike na ọ na-arụ ọrụ n'ezie! M zụtara ya na http://imvucreditsgenerator.com chọrọ mgbazinye ego bịa ...
Esi mee ngwa ngwa ịrụ ọrụ na avatar
Etu ị ga - esi mezue ọrụ ngwa ngwa na avatar Mee ihe dị mfe na nke siri ike maka gị maka ọla edo (ọ bụrụ na ọ dị) Adeline ATP maka ọla edo! Na Avatar, enweghị ụdị ọrụ a ma ọ bụ gịnị - ...
Kedu ihe bụ cloud@mail.ru esi eji ya ma ọ bụ n'efu?
Kedu ihe bụ cloud@mail.ru esi eji ya ma ọ bụ n'efu? Igwe ojii bụ ọrụ n'efu (Onye ọ bụla Mail.Ru natara 100 GB nke ohere ohere na ojii.), Nke na-enye gị ohere ịchekwa na ...
N'ime afọ ole ka netwọk mmekọrịta wee banye na kọntaktị?
N'ime afọ ole ka netwọk mmekọrịta wee banye na kọntaktị? na 2006 afọ !!! Ee na afọ 2006. Kedu ole VK dị ugbu a? Lee http://timemit.net/index.php?name=timersamp;op=viewamp;id=391 ị nwere ike ịchọpụta oge kpọmkwem nke ịmepụta netwọk mmekọrịta na ...
Esi ewepu mgbasa ozi site na Amigo nchọgharị? Enwere ọrụ dị otú ahụ na ntọala ahụ?
Esi ewepu mgbasa ozi site na Amigo nchọgharị? Enwere ọrụ dị otú ahụ na ntọala ahụ? Ọfọn, m na-adụ gị ọdụ ka ị jiri nyocha Eset online, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-akatọ ya maka ihe kpatara ya, ọ bụ ezie na o nwere ike ...
Akwụchiri akwụkwọ na ụmụ klas gị. Esi emeghe?
Akwụchiri akwụkwọ na ụmụ klas gị. Esi emeghe? Gaa na azịza m. E nwere ndị ọzọ. Na njikọ. Ọ bụrụ na onye nchịkwa gbochiri ibe a, ị ga-ede akwụkwọ ozi na adreesị ya na-arịọ gị ka ị kọwaa ihe mere eji egbochie ...
N'afọ dị aṅaa A.S. Pushkin nwụrụ
Kedu afọ A.S. Pushkin nwụrụ na 1837, Jenụwarị 27 - Pushkin, na-anata nsọpụrụ nke nwunye ya, lụsoro onye isi obodo France, J. Dantes, mgba. 1837, Jenụwarị 27 - n’agbata anọ…
Esi ehichapụ ibe na obodo foto
Otu esi ehichapụ ibe na obodo foto gị nwere ike ihichapụ na ntọala, na ihe ị ga-eme na ndị enyi gị nwụrụ anwụ, ma enwere ibe. Enweghị m ike ihichapụ profaịlụ site na foto obodo ...
Gwa m nọmba ekwentị nke nkwado ọrụ mail.ru
Gwa m nọmba ekwentị nke ọrụ nkwado maka mail.ru, emelitere ozi-e, otu esi weghachi ma ọ bụrụ na nọmba ekwentị nke ahaghị adị! Enwere m egbochi akaụntụ m, akpa ego m Qiwi abụghị onye dibịa afa ...
Nyocha bụ gịnị?
nkwenye bụ gịnị? Nyochaa bụ… http: //ru.wikipedia.org/wiki/РРСРРРСРС: РССРСРРРРРСРС ihe kwesiri ịme. Nchọpụta L9; ntinye (eng. Nyocha) nkwenye nke ohere nke nnweta nnweta nke onye njirimara gosipụtara; nkwenye nke izizi. 1 Nyocha ekwesịghị ịbụ ihe mgbagwoju anya na njirimara. Onye nyocha - ...
Kedu esi eme profaịlụ mechiri emechi na ụmụ klas gị, nke mere na ndị si mba ọzọ enweghị ike ilele ibe?
Otu esi eme profaịlụ nkeonwe na ụmụ klas ya nke mere na ndị na-apụ apụ enweghị ike ile peeji ahụ? Enweghị m ọrụ "profaịlụ emechiri." Ọ bụrụ na ịchọghị ka ndị ọrụ ndị ọzọ nwee ike ịchọta ọrụ gị ...
Ma ọ bụrụ na "ụmụ akwụkwọ ibe" gaa na peeji nke a na-adịghị ahụ anya, mmadụ nwere ike ịhụ na "nnabata" batara?
Ma ọ bụrụ na "ụmụ akwụkwọ ibe" gaa na peeji nke a na-adịghị ahụ anya, mmadụ nwere ike ịhụ na "nnabata" batara? Ndị enyi nọ na saịtị ahụ, ọ bụghị n'akụkụ nke ibe ahụ, kama n'okpuru, yana ịhụ ha, onye ọ bụla kwesịrị ...
Kedu otu esi enweta nnukwu ego na ọlaedo na avatar? Avatar
Kedu otu esi enweta nnukwu ego na ọlaedo na avatar? Ndị na-ama egwuregwu Avatar, enwere m ihe ijuanya .. ihe omume iji nweta ọlaedo maka n'efu apụtawo! Ọ dị nnọọ mfe! Ma ọ bụghị mgbe niile siri ike! Na n'ozuzu, ihe nrite di nma ...
Kedu ka esi budata ihe site na Cloud@mail.ru?
Etu esi ebudata ihe na Cloud@mail.ru? ehichapụ folda na foto n'igwe ojii na mberede, gịnị ka m ga-eme ???? dị nnọọ detuo faịlụ achọrọ n'igwe ojii ahụ site na ịhọrọ faịlụ achọrọ ma pịa bọtịnụ "chekwaa igwe ojii", ...
esi etinye ọkwa n'ọnọdụ ụmụ klas gị
Kedu ka esi etinye ọnọdụ na ụmụ klas gị Otu esi tinye ọnọdụ na Odnoklassniki? Ọnọdụ bụ obere ozi ederede karịa foto gị na ibe saịtị. A na-eji ndị na-edekọ ihe na netwọk dịka ụzọ iji gosipụta agwa gị, ...
Kedu ka esi gbanwee gaa na nhazi ọhụrụ?
Kedu ka esi gbanwee gaa na nhazi ọhụrụ? 1) Anyị na-ede nkwado: vk.com/help2) Tinye isiokwu Ịnweta na redesign http://new.vk.com/blogclick bọtịnụ dị n'okpuru ebe a banyere ijikọta ule ahụ. Ma ọ bụ kpọtụrụ nsogbu ahụ na ọrụ nkwado ...
Etu esi ebufe faịlị na mmadụ site na "igwe ojii" ka email ru?
Etu esi ebufe faịlị na mmadụ site na "igwe ojii" ka email ru? Nke mbu, faịlụ a ghaghi ihu oha. Anyị na-akpochapụ faịlụ ma ọ bụ nchekwa achọrọ, ma n'akụkụ aka nri nke ibe ahụ na-egosi: “Sharingkekọrịta Ọha ...
esi eweputa vidiyo na kọmputa
esi eweputa vidiyo gaa na komputa site ebe? na mail.ru? Anyị na-ejikọta vidiyo ahụ, dịka ọmụmaatụ http://video.mail.ru/mail/tvigo/roma/29.htmlkoy- ihe anyị na-agbanwe http://video.mail.ru/mail/tvigo/roma/v-29.flvi download Mgbatị ahụ gbanwee gbakwunye v- Nweta vidiyo na Intanet? Mfe niile vidiyo ndị a, ọ bụrụ na ị ...
Ajuju 17 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,366.